အချိန် အတိုတွင်း ကြည့်ရှု့ သူများ ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစား ခဲ့တဲ့ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အမိုက် စား TIK TOK ဗီဒီယို – Let Pan Daily
မင်းသမီးချောလေး ဖူးပွင့်သခင်ကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ထဲမှာ တစ်ယောက် အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖူးပွင့်သခင်က ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေများစွာ ရိုက်ကူးပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို အပြည့်အဝရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း သူမက အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်နေပြီး သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ ဖူးပွင့်သခင် က သီချင်းလေးအတိုင်း ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အမူအရာလေးတွေ နဲ့ အထာကျကျ ဆော့ကစားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အနက်ရောင်ကိုယ်ကျပ်ဝတ်စုံလေးကလည်း သူမရဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေကို ပေါ်လွင်ပြီး ရင်ခုန်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ကဲ…. ပရိသတ်တွေအတွက် မင်းသမီးချောလေး ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အလန်းစား tik tok လေးကို ပြန်လည် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
မင္းသမီးေခ်ာေလး ဖူးပြင့္သခင္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြ ထဲမွာ တစ္ေယာက္ အပါအဝင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖူးပြင့္သခင္က ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြမ်ားစြာ ႐ိုက္ကူးၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတြကို အျပည့္အဝရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း သူမက အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ဆက္တိုက္လုပ္ကိုင္ေနၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္လည္း ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဗီဒီယိုေလးထဲမွာေတာ့ ဖူးပြင့္သခင္ က သီခ်င္းေလးအတိုင္း ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အမူအရာေလးေတြ နဲ႔ အထာက်က် ေဆာ့ကစားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အနက္ေရာင္ကိုယ္က်ပ္ဝတ္စုံေလးကလည္း သူမရဲ႕ ပင္ကိုယ္အလွတရားေတြကို ေပၚလြင္ၿပီး ရင္ခုန္စရာေကာင္းေနခဲ့ပါတယ္။ ကဲ…. ပရိသတ္ေတြအတြက္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ဖူးပြင့္သခင္ ရဲ႕ အလန္းစား tik tok ေလးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။
မြင်သူတိုင်း အံသြသင့်စရာ ဆက်ဆီပုံ တွေ တင်ပေး လိုက်တဲ့ မေပန်းချီ ရဲ့ ရင်ဖိုစရာ ပုံရိပ်များ
မီး ခဏ ခဏ ပိတ္ခိုင္း တဲ့ ေက်ာ္ထက္ေအာင္ကို မီးထြန္းျပလိုက္တဲ့ ဟန္ၿငိမ္းဦး
အကျႌလေးတွေ ရောင်းပြီး ရန်ပုံငွေ ရှာကာ ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ လူနာတင်ယာဉ်လေးလှူနိုင်ခဲ့လို့ ပျော်နေတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ